| Mutambo Wokushanyira: 0143
ZUVA 01 :
Sarudza kubva kuKochi Airport / Ernakulam Railway station - Kutumira kuIndaneti. Kushanyira kwemo. Synagogue yechiJuda, Dutch Palace, Santa Cruz Basilica uye Chinese Fishing nets. Manheru anofarira chikepe ichifamba neSagara Rani. Usiku huno huripo paKOCHI.
ZUVA 02 :
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, endai Munnar (170 kms. / 4 hrs.), Enroute kushanyira mvura yeValara & Cheyyapara, paunosvika, tarisa kune hotera. Munnar inonyanya kufarira zvivako zvezvikomo muSouth India inozivikanwa nokuda kwekuchera tiyi minda. Kuvaraidza manheru. Usiku huno huripo MUNNAR.
ZUVA 03 :
Mushure memangwanani emangwanani, Endai Eravikulam National Park uye masikati tinotenderera tichienda kunzvimbo dzeti uye tishanyire Mettupatty Dam kuti tifare nechikepe, Echo point, Kundala. Usiku huno huripo MUNNAR.
ZUVA 04 :
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, pfuurira kuna Thekkady (120 kms / 3.5 hrs). Gara mumoyo weCardamom Hills ndiPeriyar National Park. Farai nechikepe cruise paPeriyar chikepe kuti uone mhuka dzakasiyana-siyana dzenharaunda ino. Manheru anofarira chirongwa chetsika. Usiku huno huri ku THEKKADY.
ZUVA 05 :
Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kubva kuAlleppey (170 Kms. / 4 hrs). Tarisa-kupinda muChikepe chikepe uye unakidzwe nechikepe chikepe mu "Vembanad Lake" kusvikira manheru. Usiku huno huri pa ALLEPPEY.
ZUVA 06 :
Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kubva Kanyakumari (80 kms. / 2 Hrs.). Enroute kushanyira Padmanabhapuram Palace uye Kudhindwa kuIndaneti. Nharaunda inoshanyira Gandhi Mandapam, Vivekananda Memorial uye inonakidzwa nokuvira kwezuva manheru. Usiku huno huripo KANYAKUMARI.
ZUVA 07 :
Mangwanani Ekutanga mangwanani anofarira zuva richibuda. Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kubva kuTurvandrum (95 kms. / 2.5 Hrs.) Tumira kuItele. Nharaunda inoshanyira Sri Padmanabha Swamy Temple, Napier Museum uye Zoo. Manheru ano kufara muKovalam beach. Usiku huno huripo pa TRIVANDRUM.
ZUVA 08 :
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemazuva ekunze Endai kubva kuHotels uye kudonha kuTurvandrum Airport / Railway station kusvika mberi.